साइपाल खबर, Author at साइपाल खबर - Page2of 23
१८ श्रावण २०७८, सोमबार २०:२३ साइपाल खबरLeaveaComment on मिस खामोसी डेफ २०२१ को उपाधि बझाङकी हेवनलाई
साइपालखबर संवाददाता बझाङ । बोल्न तथा सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरुको सीप, क्षमता र कौशलताको प्रदर्शन गर्न आयोजना गरिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बझाङकी हेवन उपाध्यायले उपाधि चुमेकी छन् । भारतको जमसेदपुरमा श्रवण र वाक शक्ती नभएका मानिसहरुको हितमा ...
साइपालखबर संवाददाता काठमाडौं । राजनीतिमा अर्थपुर्ण सहभागिताको सवालमा महिला नेतृहरु एकजुट हुनुपर्ने बहस सुरु भएको छ । संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था भएबमोजिम राजनीतिमा महिलाहरुको सिमित सहभागीता छ । उनीहरु समेत गुटउपगुट र दलिय स्वार्थकै ...
कविता – किर्तेको कीर्ति !
२६ असार २०७८, शनिबार २१:१९ साइपाल खबरLeaveaComment on कविता – किर्तेको कीर्ति !
बा नै बेइमान, कमिसन खोर काका, दलाल दाइ, के सिकाउने बाल–बालिकालाई ? बालुवाटारमै अनेक अनियमितता छ, के भनौँ र खै सुदूरका ती साना पालिकालाई ? बालुवाटार, बालकोट हुँदै सिंहदरबार, गाउँ गाउँमा गएको छ आजकल भ्रष्टाचार ! पशुपतिको जलहरी खरिदमै अनुसन्धान चल्दै...
२२ असार २०७८, मंगलवार २२:१० साइपाल खबरLeaveaComment on नेपालमा कार्यान्वयन हुनै सकेनन् महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने एक चौथाई सुझाव
साइपालखबर संवाददाता काठमाडौं । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) अनुमोदन गरेको ३० बर्ष बित्दा नेपालले एक चौथाई निष्कर्ष सुझाव अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । समाज सुधारक योगमाया न्यौपानेको स्मृतिको अवसर पारी राष्ट्...
१८ असार २०७८, शुक्रबार १०:३४ साइपाल खबरLeaveaComment on दुर्गम स्वास्थ्य संस्थालाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर
साइपालखबर संवाददाता बझाङ । ह्युमानिटी फाउन्डेसन नेपालको पहलमा बझाङका दुर्गम गाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायत स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरिएको छ । अक्सिजन अभावका कारण दुर्गम गाउँका स्थानियले ज्यान गुमाउन नपरोस भनेर विभिन्न संघ ...
रामदिप आचार्य नेतृत्वले सफलताको श्रेय र असफताको अपजस दुवै बोक्ने गर्दछ । नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वमाथि यही भारी थोपरिएको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जालमा हुने छलफलहरुमा युवा नेतृत्वका बारेमा थुप्रै प्रश्नहरु उठ्ने गर्छन् । असक्षम भए, हुतिहारा भए, न...
साइपालखबर संवाददाता बझाङ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खप्तड विकास क्षेत्रलाई योजना र बजेट केन्द्रित बनाउने भएको छ । सुदूरपश्चिमको पर्यटन र आर्थिक विकासको आधारस्तभ खप्तड क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने भ...
११ असार २०७८, शुक्रबार १६:४३ साइपाल खबरLeaveaComment on खप्तडछान्ना राइजिङ अफ लामातोलाद्धारा बझाङका १२ वटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण
साइपालखबर संवाददाता बझाङ । खप्तडछान्ना राइजिङ अफ लामातोलाले बझाङका १२ वटै स्थानीय तहका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरेकाे छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बझाङ मार्फत विहिबार हस्तान्तरण गरेको हाे । लामो समयदेखि विभिन्न सामाजिक कार्य र आपत...
५ असार २०७८, शनिबार १९:२८ साइपाल खबरLeaveaComment on पहिरोमा पुरिएर मृत्यु, भीरबाट लडेर बेपत्ता
साइपालखबर संवाददाता बझाङ । तलकोट गाउँपालिका–६ रजाडामा पहिरोमा पुरिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। धारामा पानी भर्दै गर्दा पहिरो जाँदा ६० वर्षीया सुना दमाईको शुक्रबार मृत्यु भएको हो। दमाईको पहिरामा पुरिएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका...